Shina ATC hazo cnc 1325 orinasa sy mpanamboatra | JCUT
Ny milina fanenonan'ny makamba Lamino dia milina manokana ampiasaina amin'ny fanapahana sy fananganana fanaka vita amin'ny mahazatra. Mety hialana amin'ny fanodinana fomba nentim-paharazana izany ary miankina amin'ny asa manual. Afaka mahatsapa ny famokarana marani-tsaina amin'ny alàlan'ny fifangaroan'ny famolavolana, famongorana ary rindrambaiko fandrafetana.
1. Fitaovana roa ambiny roa dia natokana ho an'ny gazety fanovana mandeha ho an'ny tsipika mandeha mahitsy ary ny fitaovana roa ambin'ny folo dia azo soloina an-kalalahana mba hahafenoana ny asa fanamboarana mahery vaika.
2. Amin'ny famakafakana farany, ny tombony amin'ny fisokafan'ny lamino dia ateraky ny fizotran'ny lozika fifandraisana tsy hita maso izay azo zahana. Ny tombony azo avy amin'ny fifandraisana tsy hita maso dia mampalaza be ny fisokafan'ny lamino. Raha oharina amin'ireo endrika mifandraika tsy hita maso, dia mora kokoa ny fametrahana ny fihaonana amin'ny lozisialy lozika mba hametrahana sy hanangona. Ny tokony hampidirina ilay sombin-tariby ao anaty aloka «crescent» dia apetaka miaraka tsara ireo takelaka roa.
3. Mandany fotoana fohy ny fanangonana fanaka miaraka amin'ny sombin-javatra mifandraika tsy hita maso, ny olona 1-2 dia afaka mamita ny fivorian'ny fanaka iray manontolo, manangona fotoana sy asa. Noho izany, ny milina famonoana Lamino dia malaza sy malaza kokoa.
4. Ny aesthetika an'ny mpampitohy lamino-ny mekanika fikatonana fisintahana, famolavolana mahafinaritra; haino aman-jery mirindra teknolojia mifangaro, fifandraisana maharitra; fanongotana mora-fivoriambe tsotra sy fanilihana, fotoana tsy voafetra; tsy hita maso --- Ny kabinetra dia tsy hita maso ary tena avo lenta; versatility --- famolavolana ankapobeny amin'ny famoronana, fampiasana manerana ny vilia rehetra.
Ny milina fanenonan'ny makamba Lamino dia milina manokana ampiasaina amin'ny fanapahana sy fananganana fanaka vita amin'ny mahazatra. Mety hialana amin'ny fanodinana fomba nentim-paharazana izany ary miankina amin'ny asa manual. Afaka mahatsapa ny famokarana marani-tsaina amin'ny alàlan'ny fifangaroan'ny famolavolana, famongorana ary rindrambaiko fandrafetana. Lamina tsy hita maso dia karazana vaovao mpampitambatra fanaka fanaka; fantatsika rehetra fa ny firafitra mahazatra amin'ny fanaka tontonana dia mpampitambatra telo-tokana. Telo-telo azo lazaina ho rafi-panabeazana ilaina amin'ny kojakoja fitana. Saingy, ny firafitry ny telo-tokana dia misy ny tsy fahampiana sasany amin'ny fampiasana tena, izay tsy mahafeno tanteraka ny fepetra takian'ny mpanjifa. Indrindra, rehefa mangataka ny hanao ny kabary amin'ny rindrina mirona na kabary mirongatra ny mpanjifa dia azo atao amin'ny zoro mety tsara ihany ny telo-telo.
Longteng fahatelo taona R20 - nahita bela + Linear ATC CNC Router
Faritra asa （S * Y * Z）
（Fanohanana ny halavan'ny 2800 namboarina）
GDZ 9KW * 1 + nahita fehy
Fitaovana 12 （manohana fitaovana 16 namboarina）
Dorna 1500W manompo motera
Manohana manasa mpamily môtô
Ny hafainganana ny fanovana ny fitaovana
Rafitra syntec any Taiwan
Làlan-tsivalana TBI Orinasa 25
25Izak'andro momba ny TBI
Misoroka tariby vita amin'ny vy vita amin'ny halavany
Natao manokana ho an'ny milina fanapaka
Ny tsingerin'ny rano 7.5KW
Kitapo indroa 5.5KW
Fahatelon'ny rafitry ny zotram-pénôtika farany （kabinetra mifehy mahaleo tena）
Mavesatra ny fitsaboana fikarakarana fatin-jaza (fikorotanana tarehy dimy sy ny fametrahana ny kofehy 0.02mm)
Crossbeam rindrina matevina vita amin'ny rindrina fantsom-by sy ny vy vy manenjana ny teknolojia fandriana fandokoana ny rafitry ny andry tsanganana
Kabinetra fampiasa amin'ny solosaina
Longteng patent andian-dahatsoratra, nasiana tombo-kofehy lehibe misy kabinetra fanaka lehibe
z singa singa
Z axis moto lock function, Z axis motor motor support seza
Latabatra adsorb vaksiny
Ny famolavolana patanty 50MM adsorption caliber, konody PVC fanamafisana dia tsara, aza mandeha takelaka
Auto sensor sensor
Fametrahana toerana amin'ny famahanana
Sivotra roa-fonosana fametrahana vita amin'ny silam-bolo misy tsipika aluminium
Fenitra vita amin'ny rindrina vita amin'ny bokotra vita amin'ny aluminiera manampy hidona baraika vita amin'ny barazy
Fisarahana familiana vovoka automatique miaraka amin'ny fanesorana vovoka faharoa.
Previous: Ara-toekarena efatra fanamboarana kitay hazo R4
Manaraka: 1325 spindle efatra miaraka amin'ny linear ATC
Masinina telo milina cnc hazo router